Nguwuphi uHarry Potter Character Ngaba uphawu lwakho lweZodiac luthanda kakhulu? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Nguwuphi uHarry Potter Character Ngaba uphawu lwakho lweZodiac luthanda kakhulu?
AmaWands alungile, oku kuya kuba kukuphosa. Nguwuphi uHarry Potter ongumlinganiswa ophawu lwakho lweenkwenkwezi? Ngolu lwazi unokuya kwiiHogwarts.
Abalandeli bakaHarry Potter, zilungiseleleni ii-wands zakho, oku kuyakuba kukuphosa kunye nokuziva ungathandeki malunga nolunye uthotho olulungileyo lwexesha lonke. Muggles lumka; le yenzelwe kuphela amagqwirha kunye nabathakathi phaya! Lungiselela ukubuyela kula mabali omlingo kwaye ufumanise ukuba loluphi uphawu lukaHarry Potter uphawu ngalunye lwe-zodiac olufana kakhulu. Ngaba ukulungele ukuya kwi-wizard adventure, kuba siqinisekile.
Sonke siyayithanda le saga, akunjalo ?! Kwaye sonke siyavuma ukuba UJK Rowling ungoyena mbhali ubalaseleyo ngalo lonke ixesha! Ukucinga kwakhe okucacileyo kuqinisekisa ukuba abalinganiswa bonke bahluke kakhulu kodwa ngokulinganayo banomdla, kodwa yeyiphi efana nomqondiso wakho we-zodiac? Abalandeli bazi phantse zonke iinkcukacha malunga nabalinganiswa babo ababathandayo ngenxa yeencwadi ezineenkcukacha kunye neemovie ezimangalisayo, ke lixesha lokuba uthathe izinto ukuya kwinqanaba. Fumana apha ukuba yeyiphi indlu ye-Hogwarts uphawu lwakho lwe-zodiac oluya kulungiswa ngayo.
Xa i-mercury ihamba ngokuthe ngqo?
Ngowuphi umlinganiswa ofana naye kakhulu?
Kwezo mphefumlo zingathandekiyo phaya, zilungiseleleni iitshefu zenu, kuba Iphupha lakho lobuntwana lisenokufezekiseka. Kuyinyani, ngaphandle kokuba sele kudlule iminyaka eli-10 okoko kwaphuma isahluko sokugqibela sesaga, iihambo zemigulukudu azisoze zidinise abalandeli bokwenyani.
Cofa kumqondiso wakho ongezantsi:
Fumanisa ikamva lakho ngoncedo lwePsychic! Zonke izinto ezifundwayo zi-100% emngciphekweni, ziyimfihlo kwaye azichazwanga .
Umlingiswa kaHarry Potter weeAries
I-Aries nguNjingalwazi Severus Snape
Nazi ezimbini uwedwa abalinganiswa. Aries kunye noProfesa Snape inokurhoxiswa kwaye kuyabanda ngokubhekisele kwabanye, kodwa apho basilela khona charisma, bayenzela ngokuncoma okunzulu, uthando, kunye imbeko kwabo babathandayo . Ngokwenene zithambile phantsi kwangaphandle kwazo okunzima.
uyifumana njani indoda eyi-aries
Umlingiswa kaHarry Potter weTaurus
ITaurus nguRon Weasley
NjengoRon Weasley, iTaurus injalo ngokwendalo enomtsalane . Abantu batsaleleka kumdlalo wabo wokuhlekisa, kodwa bayakwazi ukungakhuli ngokweemvakalelo. Ngamaxesha okudinga, zii inokuthenjwa abantu oza kudibana nabo. URon Weasley kunye noTaurus zizinto ezingena kuphila ngaphandle kwazo!
Umlingiswa kaHarry Potter weGemini
IGemini nguHermione Granger
Ezi incwadi abalinganiswa basoloko benempendulo. Babo yazi-bonke ubuntu Ungafikelela kwimithambo-luvo yabantu, kodwa qiniseka, Gemini ungoyena mqondiso unomdla kakhulu we-zodiac kwaye uHermione yena uye wafunda ixesha elide ngokwaneleyo ukuba abethe umlo onzima xa kufuneka!
Umlingiswa kaHarry Potter woMhlaza
Umhlaza yiRubeus Hagrid
Umhlaza inkathalo ibenza bafana noHagrid, onokuthi anike nantoni na ukumbona uHarry ephumelela kwaye emgcina ekhuselekile. Zombini iCancer kunye neHagrid Imovie , ngokweemvakalelo , uvakalelo , kunye ukungazithembi abalinganiswa. Nangona kunjalo, babagcini bendalo!
Umlingiswa kaHarry Potter kaLeo
ULeo nguHarry Potter
UGryffindor oyinyani, uLeo noHarry akoyiki , unyanisekile Abahlobo abagqibelele. Aboyiki ingozi kwaye baya kuma nganto de bayigcine imini. Abanye bathi nguLeos okethiwe ngenxa yezi mpawu, kanye njengokuba uHarry wayekhethwe xa wayenxunguphele okomntwana yiNkosi Voldemort!
Umlingiswa kaHarry Potter weVirgo
IVirgo nguNeville Longbottom
NjengoNeville, iiVirgos zinokuba njalo ndineentloni okanye baziva bengaqinisekanga ngesiqu sabo xa ujongene nabantu ababonakala benetalente ngakumbi. Ubuntununtunu bunokufumana okona kulungileyo kwezi zimbini, kodwa xa unikwe ithuba, uVirgo noNeville unokuguqula phambi kwamehlo akho ube ligorha awuzange ubaphuphe ukuba babe njalo!
nini i-mercury iya kwi-retrograde
Umlingiswa kaHarry Potter weLibra
ILibra nguAlbus Dumbledore
NjengeLibra yokwenyani, iDumbledore injalo ziqhutywa luxolo kunye nokufumana ubulungisa ngokuchasene nobubi emhlabeni. Aba babini baneempawu ezithandekayo ze ukuvuma xa bengalunganga kwaye ngenxa yobuthathaka babo beempawu zodiac. Ukrelekrele kakhulu kwaye ubuqhawe, uLibra kunye noDumbledore ziinkokheli abantu abancinci abajonga kuzo ukuze bafumane iingcebiso.
Umlinganiswa kaHarry Potter weScorpio
IScorpio yiNkosi uVoldemort
Ngelishwa, ubuntu beScorpio Umoya wokuchasana Utshatisa abalinganiswa abakhohlakeleyo eHarry Potter. NjengoNkosi Voldemort, iScorpio akunyamezeli ukungcatshwa . Zombini zinomtsalane ngokumangalisayo kwaye zikrelekrele, kodwa kunokubangela iintlungu ezimanyumnyezi kwabanye ngaphandle kwengqwalaselo.
Umlingiswa kaHarry Potter weSagittarius
I-Sagittarius nguDobby uElf
I-Sagittarius yile thambisa kwaye igcwele amaqhinga njengoDobby the Elf. Ezi zimbini ziyathanda ukusukela kulunge . Ekugqibeleni, kuphela ufuna inkululeko kunye nokwenza ikamva labo!
Umlingiswa kaHarry Potter weCapricorn
UCapricorn nguNjingalwazi uMinerva McGonagall
NjengoNjingalwazi McGonagall, uCapricorn unetalente kakhulu emsebenzini, kodwa ubuntu babo, ngokuqinisekileyo, phezulu . Ngelixa ukuqina kukaCapricorn kunokubenza bangabi ngabathandwa fan, nangona kunjalo ukuhlekise xa ungalindelanga ukuba bajonge kwaye bajonge ukwenza okona kulungileyo kubo bonke.
I-7777 ithetha ukuba doreen isidima
Umlingiswa kaHarry Potter weAquarius
U-Aquarius nguDraco Malfoy
Isimo esicocekileyo segazi likaDraco simenza angabi nto ngaphantsi kwe-Aquarius. Zombini zinjalo -ngathethekiyo kwaye kunjalo abaphula umthetho ngokwenyani . Ukujonga ukulwa nocwangco olumiselweyo, u-Aquarius noMalfoy benza iqela eliyimfihlakalo, elikhohlakeleyo, abakwazi ukukufulathela nangaliphi na ixesha!
UHarry Potter umlinganiswa wePisces
Iipisces nguLuna Lovegood
Iintlanzi ngonaphakade ndiphupha nje nge-whimsical, spacey Luna Lovegood! Bakumazwe abo! Kunye Ingqondo yooky ye Uburharha kunye nesimbo se-eccentric, iiPisces kunye neLuna zezona zihlobo zibalaseleyo ungazilindelanga!
Nguwuphi uHarry Potter Character oyiyo?
Udibana njani noFundo lwePsychic ngokuSebenza kweAstrofame
Imihla eNgcweleyo yenyanga yowama-2021, kunye neMihla yeeNyanga ezi-2 eziPhambili
7 linani lika
lithetha ntoni inani u-444 ku-hebrew
Ithetha ntoni i-333 kubalo lwamanani
indlela yobomi 6 ukubhula ngamanani
Ngaba sagittarius kunye nokuhambelana nomhlaza